Notice: Undefined index: data in views_plugin_cache->restore_headers() (line 236 of /var/www/html/missuniversemyanmar.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_cache.inc).
Notice: Undefined index: data in views_plugin_cache->restore_headers() (line 242 of /var/www/html/missuniversemyanmar.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_cache.inc).
Announcement of Miss Grand Myanmar
Miss Universe Myanmar 2017 ပြိုင်ပွဲတွင် First runner up ရရှိသူ ရွှေအိမ်စည် အား Miss Grand International 2017 ပြိုင်ပွဲသုို့ စေလွှတ်ယှဉ်ပြိုင်စေမည့် အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
MUM 2018 Grand Final - Ticket
Miss Universe Myanmar 2018 Event Final Ticket များကို 20-9-2017 ရက်နေ့မှစ ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမှစပြီး booking တင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Booking တင်ရန် - 01 393102 , 01 392099 , 09428183634 , 09421001028
MUM 2018 အလှမယ်များ၏ လူမှုရေးခရီးစဉ် အတွင်း လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်းနှင့် လှူဒါန်းစာရင်းများ
မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၈ အလှမယ်များသည် ဩဂုတ်လ(၇) ရက်နေ့မှ (၁၃) ရက်နေ့အထိ ကရင်ပြည်နယ် လူမှုရေးခရီးစဉ်တွင် လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုလူမှုရေးခရီးစဉ်အတွင်း မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၈ အလှမယ်များ၏ လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်း နှင့် လှူဒါန်းစာရင်း
Miss Universe Myanmar 2017 National Costume